Media Sharing https://itechmedia.info/mm News and Media Sharing Sat, 13 Jun 2020 00:33:48 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.4.4 အရာရာကို အောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ https://itechmedia.info/mm/archives/6223 https://itechmedia.info/mm/archives/6223#respond Sat, 13 Jun 2020 00:33:48 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6223
မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ
အရာရာကို အောင်မြင်စေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ ဇယော (၉ ခေါက်ရွတ်)
စီးပွါးလာဘ်လာဘ တိုးတက် စေသောဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ လာဘော
ချမ်းသာသုခ အဖြာဖြာကို ရစေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ သုခေါ။
စည်းစိမ် အသုံးအဆောင်များ ရစေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ ဘောဂေါ။
အခြွေအရံ အသင်းအပင်းများ ရစေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ ယသော။
ခွန်အားဗလ ရရှိစေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ ဗလော။
ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော် ပြည့်စုံစေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာ တေဇော။
မယှံဒေတု မဟာ ဣန္ဒော။
ဘုန်းကျက်သရေ တိုးစေသော ဂါထာ
မယှံဒေတု မဟာပုညော ။
တစ်နေ့လျင် တစ်မျိူးမျိူး၉ ကြိမ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပါ
မဟာမုနိ … မဟာမုနိ မည်ရှိထင်ပေါ် ရုပ်ရှင်တော် မြတ်ဘုရား…
ဧတေန သစ္စဝစ္စေန … ဤမှန်ကန်သော သစ္စာ စကားကြောင့်
သမ္မာဒေဝေါ … နတ်ကောင်း နတ်မြတ် နတ်အပေါင်းသည်
မံ … အကျွန်ပ်ကို
သဒါ .. နေ့ရောညပါဘယ်ခါမဆိုင်း အချိန်တိုင်း
နိစ္စံ … အမြဲ
ပါလေတု … စောင့်ရှောက် ကူညီ မစ တော်မူပါ အရှင်ဘုရား။
အရာရာကို အောငျမွငျစသေော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုငျးဆောငျ ထားပါ
မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုငျးဆောငျ ထားပါ
အရာရာကို အောငျမွငျစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ ဇယော (၉ ခေါကျရှတျ)
စီးပှါးလာဘျလာဘ တိုးတကျ စသေောဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ လာဘော
ခမျြးသာသုခ အဖွာဖွာကို ရစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ သုခေါ။
စညျးစိမျ အသုံးအဆောငျမြား ရစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ ဘောဂေါ။
အခွှအေရံ အသငျးအပငျးမြား ရစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ ယသော။
ခှနျအားဗလ ရရှိစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ ဗလော။
ဘုနျးတနျခိုး အာနုဘျော ပွညျ့စုံစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာ တဇေော။
မယှံဒတေု မဟာ ဣန်ဒော။
ဘုနျးကကျြသရေ တိုးစသေော ဂါထာ
မယှံဒတေု မဟာပုညော ။
တဈနလေ့ငျြ တဈမြိူးမြိူး၉ ကွိမျရှတျဖတျ ပူဇျောပါ
မဟာမုနိ … မဟာမုနိ မညျရှိထငျပျေါ ရုပျရှငျတျော မွတျဘုရား…
ဧတနေ သစ်စဝစ်စနေ … ဤမှနျကနျသော သစ်စာ စကားကွောငျ့
သမ်မာဒဝေေါ … နတျကောငျး နတျမွတျ နတျအပေါငျးသညျ
မံ … အကြှနျပျကို
သဒါ .. နရေ့ောညပါဘယျခါမဆိုငျး အခြိနျတိုငျး
နိစ်စံ … အမွဲ
ပါလတေု … စောငျ့ရှောကျ ကူညီ မစ တျောမူပါ အရှငျဘုရား။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6223/feed0ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေက အခုမှ စမှာတဲ့… https://itechmedia.info/mm/archives/6221 https://itechmedia.info/mm/archives/6221#respond Fri, 12 Jun 2020 15:49:40 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6221
အခုမှ စမှာ တဲ့
ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစတွေတော့ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးတကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြတယ်…။ တကယ်လည်း ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ် …။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ သေကြ ကျေကြတာအများကြီးပါပဲ…။ ရောဂါပိုးအတွက် ဆေးမရှိသေးဘူး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတုန်းရှိသေးတယ် …။
အမေရိကန်ကစတဲ့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဟာ တခုတကမ္ဘာလုံးကို ကူးစက်ပြန့်ပွားပြီး အခြေအနေကိုမထိမ်းနိုင်ခဲ့ရင် ကိုဗစ်ထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ဖို့ တာစူနေကြပြီ …။
ကိုဗစ်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေဟာ ဆန္ဒပြမူ့အောက်မှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီ ဆန္ဒပြမှုတွေရပ်သွားပြီးဆိုရင်တောင် ကိုဗစ် ကူးစက်မှုက ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာမှာ အသေအချာပါပဲ …။
အခု အိန္ဒိယတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့မှာ ကူးစက်မှုနုန်းက အရမ်းမြင့်မားနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါ ကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်လာနေပြီ …။
တကမ္ဘာလုံးရဲ့ စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှုဟာ မှန်းဆလို့မရလောက်အောင်ကို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးနေပြီ …။
ကိုဗစ်ဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုဗစ်ထက်ဆိုးရွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကို လူသားတွေ ထပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ရပြန်တယ် …။
ဒါနဲ့ရော ပြီးသွားမှာလားလို့ မေးစရာရှိတယ်…။ မပြီးသေးပါဘူး တဲ့…။အခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ အရမ်းဆိုးရွားနေပြီလို့ ထင်ထားကြပေမဲ့ မထင်ကြပါနဲ့အုံး …။
အခုထက်ပိုဆိုးတဲ့ အခြေအနေ တွေ ထပ်ပြီးလာဖို့ ကျန်သေးတယ်တဲ့…..ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲစေဖို့ ပျက်စီးပေးရမဲ့ ပျက်စီးမူ့တွေက အခုမှ စမှာ တဲ့ …။
ကဲ……ဘာတွေလာမလဲ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာ စောင့်သာကြည့်ကြပေတော့…။ ယုံကြည်တဲ့သူတွေ ဘုရား တရားသာ ပိုလုပ်ထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ် …။
အခုမှ စမှာတဲ့….ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေ တခုပြီးတခု ထပ်လာလိမ့်ဦးမယ်တဲ့ …။
ချိန်းခြောက်မူ့ လို့ အပြောခံရတော့မှာမို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေတော့ …။
အခုမှ စမှာ တဲ့ …။ ။
ဦးမြင့်ခိုင် / ယုံကြည်လျှင် share နိုင်ပါသည် …။
ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျထားတဲ့ ဘေးဒုက်ခတှကေ အခုမှ စမှာတဲ့…
အခုမှ စမှာ တဲ့
ကိုဗဈရောဂါပိုးစတှတေော့ ကွောကျစရာကောငျးလိုကျတာ ဆိုပွီးတကမ်ဘာလုံးက စိုးရိမျထိတျလနျ့ကွတယျ…။ တကယျလညျး ကွောကျစရာကောငျးလှပါတယျ …။
နိုငျငံတိုငျးမှာ သကွေ ကကြွေတာအမြားကွီးပါပဲ…။ ရောဂါပိုးအတှကျ ဆေးမရှိသေးဘူး စိုးရိမျထိတျလနျ့နတေုနျးရှိသေးတယျ …။
အမရေိကနျကစတဲ့ လူမြိုးရေး ပဋိပက်ခဟာ တခုတကမ်ဘာလုံးကို ကူးစကျပွနျ့ပှားပွီး အခွအေနကေိုမထိမျးနိုငျခဲ့ရငျ ကိုဗဈထကျကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အခွအေနဖွေဈဖို့ တာစူနကွေပွီ …။
ကိုဗဈအတှကျထုတျထားတဲ့စညျးကမျးခကျြတှဟော ဆန်ဒပွမူ့အောကျမှာ ပြောကျဆုံးခဲ့ရပွီ ဆန်ဒပွမှုတှရေပျသှားပွီးဆိုရငျတောငျ ကိုဗဈ ကူးစကျမှုက ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျမွငျ့တကျလာမှာ အသအေခြာပါပဲ …။
အခု အိန်ဒိယတို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့တို့မှာ ကူးစကျမှုနုနျးက အရမျးမွငျ့မားနပွေီး မွနျမာနိုငျငံအတှကျပါ ကွောကျစရာကောငျးလှတဲ့ အခွအေနတှေဖွေဈလာနပွေီ …။
တကမ်ဘာလုံးရဲ့ စီးပှားရေးဆုတျယုတျမှုဟာ မှနျးဆလို့မရလောကျအောငျကို ဆုတျယုတျပကျြစီးနပွေီ …။
ကိုဗဈဟာ ကွောကျစရာကောငျးတယျလို့ထငျနတေဲ့အခြိနျမှာ ကိုဗဈထကျဆိုးရှားနိုငျတဲ့အခွအေနတေခုကို လူသားတှေ ထပျပွီး ရငျဆိုငျရပွနျတယျ …။
ဒါနဲ့ရော ပွီးသှားမှာလားလို့ မေးစရာရှိတယျ…။ မပွီးသေးပါဘူး တဲ့…။အခုဖွဈနတေဲ့ အခွအေနတှေဟော အရမျးဆိုးရှားနပွေီလို့ ထငျထားကွပမေဲ့ မထငျကွပါနဲ့အုံး …။
အခုထကျပိုဆိုးတဲ့ အခွအေနေ တှေ ထပျပွီးလာဖို့ ကနျြသေးတယျတဲ့…..ကမ်ဘာကွီးပွောငျးလဲစဖေို့ ပကျြစီးပေးရမဲ့ ပကျြစီးမူ့တှကေ အခုမှ စမှာ တဲ့ …။
ကဲ……ဘာတှလောမလဲ ဘာတှဖွေဈမလဲ ဆိုတာ စောငျ့သာကွညျ့ကွပတေော့…။ ယုံကွညျတဲ့သူတှေ ဘုရား တရားသာ ပိုလုပျထားကွဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျ …။
အခုမှ စမှာတဲ့….ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ထငျထားတဲ့ ဘေးဒုက်ခတှေ တခုပွီးတခု ထပျလာလိမျ့ဦးမယျတဲ့ …။
ခြိနျးခွောကျမူ့ လို့ အပွောခံရတော့မှာမို့ ဒီလောကျပဲ ပွောပါရစတေော့ …။
အခုမှ စမှာ တဲ့ …။ ။
ဦးမွငျ့ခိုငျ / ယုံကွညျလြှငျ share နိုငျပါသညျ …။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6221/feed0လက်မထပ်ခင် သင့်ချစ်သူကို မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၅)ခု… https://itechmedia.info/mm/archives/6216 https://itechmedia.info/mm/archives/6216#respond Fri, 12 Jun 2020 15:27:14 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6216
အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုပ်ထိုးဆိုတာက ပြုလုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ သင့်ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အတူကုန်ဆုံးဖို့၊ အရာရာအားလုံးကို ဝေမျှခံစားဖို့၊ ပေးဆပ်တတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ် …။
ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်စေဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားသူကို ဒီမေးခွန်းတွေ မေးကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်နော် …။
၁။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ
ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ကလေးရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းက အပြောင်းအလဲတွေ အများရှိဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်ယူမယ်၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ယူမယ် စသဖြင့် ကြိုတင်ဆွေးနွေးထား သင့်ပါတယ် …။
၂။ တစ်ဦးရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အယူအဆတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ တစ်ဦးက သေချာသိပြီလား။ ငွေကို ဘယ်လို သုံးမယ် ဘယ်လိုစုမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေ တူညီမှုရှိရဲ့လား …။
ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် အရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စုံတွဲတွေမှာတောင် အချစ်လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်မှုရှိတဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခု ရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ လက်မထပ်ခင်ကတည်းက ရှေ့လျှောက်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကို မေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါ …။
၃။ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုခြင်း ထပ်တူကျရဲ့လား။ ကိုယ်ချစ်သလောက် ပြန်ချစ်နိုင်လား
ရေရှည်လက်တွဲသွားဖို့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ကြင်နာမှုရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ နှစ်ဦးသား အကြားမှာ ချင်ခင်ကြင်နာမှုမရှိတော့တာကို ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ သေချာဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ …။
၄။ အေးအတူ ပူအမျှ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား
လူနှစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ ဆုံးဖြတ်စရာကိစ္စတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ မျိုးစုံကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သဘောထားချင်း မျှတဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် သဘောတူညီမှုရှိမှသာ ရေရှည်လက်တွဲနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
၅။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို လက်ခံနိုင်ပြီလား
လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း နှစ်ဦးစလုံးမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတာ ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် လစ်လျူရှုထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ပြဿနာတွေက စောင့်ကြိုနေမှာ သေချာပါတယ်။ လူနှစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ကြတယ်ဆိုပါစေ၊ ကိုယ်ပိုင်အချိန် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြန်အလှန်လေးစား တတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
၆။ နှစ်ဖက်မိသားစုတွေကို အပြန်အလှန်လေးစားလက်ခံနိုင်ပြီလား
ဒါအချက်က သိပ်တောင်စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ နှစ်ဖက်မိသားစုရဲ့လက်ခံနိုင်မှုနဲ့ ချစ်ခင်မှုက အိမ်ထောင်တစ်ခု ခိုင်မြဲဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ တဖက်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတစ်ခုခု ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ဖြေရှင်းပြီး လက်ခံပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။
၇။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တဖက်သူ ငြိုငြင်စရာတွေက ဘာတွေလဲ
နံပါတ်(၆)မေးခွန်းရဲ့ အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရည်မှန်းထားသူက ကိုယ့်မိသားစုကို ငြိုငြင်ရတဲ့အချက်တွေ သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကြိုက်တာတွေ သိလာပြီဆိုရင် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ မိသားစုမှာ မိသားစုဝင်မဟုတ်သူတစ်ယောက် လက်မခံနိုင်တဲ့ အချက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ကြိုးစားညှိနှိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
၈။ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် အားလုံးကို ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်နိုင်ပြီလား
ချစ်သူရည်းစားဘ၀မှာတောင် အပြန်အလှန်အလျှော့ပေးညှိနှိုင်းရတာတွေ၊ ပေးဆပ်ရတာတွေရှိတာကြောင့် အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်က ပိုအရေးကြီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန် တတ်နိုင်သမျှပေးဆပ်စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ် …။
၉။ အခြေအနေကြောင့် တစ်နေရာစီခွဲနေရရင် နေနိုင်မှာလား
ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စတွေ အဖြစ်အပျက်တွေအတွက် အမြဲတမ်းအတူရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်က အခြားတစ်နေရာကို ခွဲနေရမယ်ဆိုရင်လည်း အပြန်အလှန် ခွန်အားပေးပြီး ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
၁၀။ နှစ်ဦးသားအတွင်းရေးတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးနိုင်မှာလား
အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အူမချေးခါးမကျန် အတွင်းသိအစင်းသိ သိထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီလို အတွင်းရေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှက်ကြောက် သိုဝှက်မထားပဲ အချင်းချင်းအပွင့်လင်းဆုံး ဆွေးနွေးပါ …။
၁၁။ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် အကုန်သိပြီလား
လက်မထပ်ခင်မှာ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်က မကောင်းတာတွေရော ကောင်းတာတွေပါ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်သင့်ပါတယ်။ နောက်မှသိလာရမယ်ဆိုရင် အယုံကြည်ရဆုံးသူက လိမ်တာခံရသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးမှာ မကောင်းတဲ့အချက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတိုင်ပင်ပါနော် …။
နောက်ထပ် မေးခွန်းလေးခုကတော့ –
၁၂။ အသက်တွေကြီးလာချိန်အထိ အတူရှိနေဖို့ စိတ်ကူးထားလား
၁၃။ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်မှာရှိတာအားလုံးကို ပေးဆပ်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီလား
၁၄။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖူးစာဖက်တွေအဖြစ် နှလုံးသားချင်းထပ်တူကျသူတွေအဖြစ် လက်ခံနိုင်ပြီလား
၁၅။ ကိုယ်ပိုင်အတ္တတွေထဲ နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီအလေးအမြတ်ထားနိုင်ပြီလား စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
လကျမထပျခငျ သငျ့ခဈြသူကို မေးကွညျ့သငျ့တဲ့ မေးခှနျး(၁၅)ခု…
အိမျထောငျပွု၊ ဘုရားတညျ၊ ဆေးမငျရညျစုပျထိုးဆိုတာက ပွုလုပျပွီးရငျ ပွနျပွငျဖို့ ခကျခဲတဲ့ အရေးကိစ်စတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီထဲကမှ အိမျထောငျပွုခွငျးဟာ သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခု ဖွဈပါတယျ။ အခွားလူတဈယောကျနဲ့ သငျ့ရဲ့ဘဝတဈခုလုံးကို အတူကုနျဆုံးဖို့၊ အရာရာအားလုံးကို ဝမြှေခံစားဖို့၊ ပေးဆပျတတျဖို့ ဆုံးဖွတျရတဲ့ အခြိနျဖွဈပါတယျ …။
ဒီလိုဆုံးဖွတျရတာက စိုးရိမျစရာဖွဈသလို စိတျလှုပျရှားစရာလညျးကောငျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ မှနျကနျစဖေို့အတှကျ သငျ့ရဲ့ဘဝလကျတှဲဖျောဖွဈဖို့ရညျမှနျးထားသူကို ဒီမေးခှနျးတှေ မေးကွညျ့ဖို့ လိုပါလိမျ့မယျနျော …။
၁။ အိမျထောငျပွုပွီး ကလေးယူဖို့ အစီအစဉျရှိမရှိ
ဒီမေးခှနျးက အရေးကွီးပါတယျ။ အိမျထောငျတဈခုမှာ ကလေးရှိခွငျး၊ မရှိခွငျးက အပွောငျးအလဲတှေ အမြားရှိဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးယူဖို့ အစီအစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျအခြိနျယူမယျ၊ ဘယျနှဈယောကျယူမယျ စသဖွငျ့ ကွိုတငျဆှေးနှေးထား သငျ့ပါတယျ …။
၂။ တဈဦးရဲ့ ငှကွေေးဆိုငျရာ အယူအဆတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှေ တဈဦးက သခြောသိပွီလား။ ငှကေို ဘယျလို သုံးမယျ ဘယျလိုစုမယျဆိုတဲ့ စိတျကူးတှေ တူညီမှုရှိရဲ့လား …။
ငှရေေးကွေးရေးကိစ်စနဲ့ပတျသကျလာရငျ အရမျးခဈြပါတယျဆိုတဲ့ စုံတှဲတှမှောတောငျ အခဈြလြော့သှားတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နှဈဦးနှဈဖကျ ကနြေပျမှုရှိတဲ့ ငှကွေေးစီမံခနျ့ခှဲမှုတဈခု ရှိထားဖို့ လိုပါတယျ။ လကျမထပျခငျကတညျးက ရှလြေှ့ောကျငှကွေေးကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဘယျလိုကိုငျတှယျမလဲဆိုတာကို မေးမွနျးဆှေးနှေးထားပါ …။
၃။ ခဈြခငျကွငျနာမှုခွငျး ထပျတူကရြဲ့လား။ ကိုယျခဈြသလောကျ ပွနျခဈြနိုငျလား
ရရှေညျလကျတှဲသှားဖို့အတှကျ တဈဦးနဲ့တဈဦး အပွနျအလှနျခဈြခငျကွငျနာမှုရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။ နှဈဦးသား အကွားမှာ ခငျြခငျကွငျနာမှုမရှိတော့တာကို ခံစားနရေပွီဆိုရငျတော့ သခြောဆှေးနှေးဖို့ လိုအပျနပေါပွီ …။
၄။ အေးအတူ ပူအမြှ ဖွဈနိုငျရဲ့လား
လူနှဈယောကျလကျထပျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ နှဈယောကျတဈဘ၀ ဖွဈသှားပါပွီ။ ဘဝတဈလြှောကျမှာ ဆုံးဖွတျစရာကိစ်စတှေ၊ အဖွဈအပကျြတှေ မြိုးစုံကွုံတှရေ့မှာဖွဈပွီး တဈဦးနဲ့တဈဦး သဘောထားခငျြး မြှတဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အပွနျအလှနျ သဘောတူညီမှုရှိမှသာ ရရှေညျလကျတှဲနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
၅။ သူ့ဘကျ ကိုယျ့ဘကျ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှကေို လကျခံနိုငျပွီလား
လကျထပျပွီးတဲ့နောကျပိုငျးမှာလညျး နှဈဦးစလုံးမှာ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ ရှိနဦေးမှာဖွဈပါတယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးဆိုတာ ဘဝရဲ့အရေးကွီးတဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ လဈလြူရှုထားလို့ မဖွဈပါဘူး။ သူ့ဘကျ ကိုယျ့ဘကျ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေို အပွနျအလှနျလေးစားမှုရှိဖို့ လိုပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ ပွဿနာတှကေ စောငျ့ကွိုနမှော သခြောပါတယျ။ လူနှဈယောကျ ဘယျလောကျပဲ ခဈြကွတယျဆိုပါစေ၊ ကိုယျပိုငျအခြိနျ ကိုယျပိုငျလှတျလပျခှငျ့ကို အပွနျအလှနျလေးစား တတျရမှာ ဖွဈပါတယျ …။
၆။ နှဈဖကျမိသားစုတှကေို အပွနျအလှနျလေးစားလကျခံနိုငျပွီလား
ဒါအခကျြက သိပျတောငျစဉျးစားနစေရာမလိုပါဘူး။ နှဈဖကျမိသားစုရဲ့လကျခံနိုငျမှုနဲ့ ခဈြခငျမှုက အိမျထောငျတဈခု ခိုငျမွဲဖို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ အကယျ၍ တဖကျမိသားစုနဲ့ပတျသကျပွီး ပွဿနာတဈခုခု ရှိနတေယျဆိုရငျလညျး ဖွရှေငျးပွီး လကျခံပေးနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာပဲ ဖွဈပါတယျနျော …။
၇။ ကိုယျ့မိသားစုနဲ့ပတျသကျပွီး တဖကျသူ ငွိုငွငျစရာတှကေ ဘာတှလေဲ
နံပါတျ(၆)မေးခှနျးရဲ့ အဆကျဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ရညျမှနျးထားသူက ကိုယျ့မိသားစုကို ငွိုငွငျရတဲ့အခကျြတှေ သိဖို့ဖွဈပါတယျ။ သူမကွိုကျတာတှေ သိလာပွီဆိုရငျ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျးရဲ့ မိသားစုမှာ မိသားစုဝငျမဟုတျသူတဈယောကျ လကျမခံနိုငျတဲ့ အခကျြတှရှေိတတျပါတယျ။ ဒါကို ကွိုးစားညှိနှိုငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ …။
၈။ အိမျထောငျရေးအတှကျ အားလုံးကို ပေးဆပျစှနျ့လှတျနိုငျပွီလား
ခဈြသူရညျးစားဘဝမှာတောငျ အပွနျအလှနျအလြှော့ပေးညှိနှိုငျးရတာတှေ၊ ပေးဆပျရတာတှရှေိတာကွောငျ့ အိမျထောငျတဈခု တညျထောငျမယျဆိုရငျ ဒီအခကျြက ပိုအရေးကွီးလာပွီဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျရေး ခိုငျမွဲဖို့အတှကျ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးပဲဖွဈဖွဈ အပွနျအလှနျ တတျနိုငျသမြှပေးဆပျစှနျ့လှတျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ …။
၉။ အခွအေနကွေောငျ့ တဈနရောစီခှဲနရေရငျ နနေိုငျမှာလား
ကွိုမမွငျနိုငျတဲ့ အရေးကိစ်စတှေ အဖွဈအပကျြတှအေတှကျ အမွဲတမျးအတူရငျဆိုငျကြျောဖွတျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ အလုပျကိစ်စကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ တဈယောကျက အခွားတဈနရောကို ခှဲနရေမယျဆိုရငျလညျး အပွနျအလှနျ ခှနျအားပေးပွီး ထောကျပံ့ကူညီပေးနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။
၁၀။ နှဈဦးသားအတှငျးရေးတှေ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးနိုငျမှာလား
အိမျထောငျပွုတဲ့အခါမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး အူမခြေးခါးမကနျြ အတှငျးသိအစငျးသိ သိထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒီလို အတှငျးရေးတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရှကျကွောကျ သိုဝှကျမထားပဲ အခငျြးခငျြးအပှငျ့လငျးဆုံး ဆှေးနှေးပါ …။
၁၁။ တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ အကုနျသိပွီလား
လကျမထပျခငျမှာ တဈယောကျအကွောငျးကို တဈယောကျက မကောငျးတာတှရေော ကောငျးတာတှပေါ အားလုံးသိပွီးသားဖွဈသငျ့ပါတယျ။ နောကျမှသိလာရမယျဆိုရငျ အယုံကွညျရဆုံးသူက လိမျတာခံရသလို ခံစားရနိုငျပါတယျ။ အားလုံးမှာ မကောငျးတဲ့အခကျြတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှရှေိပါတယျ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုတိုငျပငျပါနျော …။
နောကျထပျ မေးခှနျးလေးခုကတော့ –
၁၂။ အသကျတှကွေီးလာခြိနျအထိ အတူရှိနဖေို့ စိတျကူးထားလား
၁၃။ ဘယျအခြိနျပဲဖွဈဖွဈ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ဘကျမှာရှိတာအားလုံးကို ပေးဆပျဖို့အဆငျ့သငျ့ဖွဈပွီလား
၁၄။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖူးစာဖကျတှအေဖွဈ နှလုံးသားခငျြးထပျတူကသြူတှအေဖွဈ လကျခံနိုငျပွီလား
၁၅။ ကိုယျပိုငျအတ်တတှထေဲ နှဈဦးသားဆကျဆံရေးကို ပိုပွီအလေးအမွတျထားနိုငျပွီလား စတာတှပေဲဖွဈပါတယျနျော …။ ။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6216/feed0ကလေးမွေးပြီး(၃)ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့သေဆုံးသွားတဲ့(ဖြစ်ရပ်မှန်) https://itechmedia.info/mm/archives/6212 https://itechmedia.info/mm/archives/6212#respond Fri, 12 Jun 2020 14:24:31 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6212
ကလေးမွေးပြီး ရင် ၄၅ ရက် တိတိ ယောကျာ်း နဲ့ မနေနဲ့ ”ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျ စကားပေါ့ ။
ယောကျာ်းဖြစ်ရ တာ ကံကောင်းပါတယ် ။
“ကလေးမွေးပြီးရင် ၄၅ ရက်တိတိ ယောကျာ်းနဲ့ မနေနဲ့”ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျစကားပေါ့။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးကို အနားပေးထားတယ် ။
အင်မတန်မှကို ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးမွေးဖွားမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အားပြန်မွေးရတဲ့ကာလကိုး။ သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် နေရတယ် ။
ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အမျိုးသားကလည်း သူ့ကို သည်းသည်းလှုပ် ဂရုစိုက်တတ်ကြတာပေါ့ ။
သူစားချင်တာ၊ သူဖြစ်ချင်တာ အကုန်လုပ်ပေးတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ အားပေးတယ်။ သူလုပ်ရမယ့် ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေကို ၀ိုင်းကူပေးကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ဒီလိုအားပေးကူညီမှုတွေ မရနေပါဘူး။ သူ့အလုပ်တွေ သူ့ဟာသူ လုပ်ရတယ်။ အိမ်အလုပ်တွေလည်း ၀င်ကူရတယ်။ ကလေးဝေယျာဝစ္စလည်း သူပဲလုပ်ရပါတယ်။
အမျိုးသားက ဒါတွေ သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ပိုက်ဆံရှာရမယ့် အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တယ်။ ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာ အုပ်စုထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ အဲဒီထက်တောင် ပိုပါသေးတယ်။
တစ်ရက်မှာ Win-Win Organization ဆေးကုသနေတဲ့ဆီကို သူ ရောက်လာပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးတာ ၁၀ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့မိန်းမကိုယ် အောက်ပိုင်းမှာ အနာဖြစ်လို့တဲ့ ။
အဖွဲ့ရဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဆုဇင်ဝင်းသန်းက စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ ကလေးမွေးပြီး ပြန်ချုပ်ထားတဲ့နေရာက ကွဲနေတာ။ ပိုးတွေဝင်ပြီး အနံ့အသက်လည်း တော်တော်မကောင်းတော့ဘူး ။
ဒါနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးပေးရုံနဲ့ မရဘဲ ဆေးရုံကိုသွားမှ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ အိမ်မှာမွေးပြီး သေသေချာချာ မချုပ်ခဲ့လို့ ပိုးဝင်တာလား အထင်နဲ့ မေးလိုက်တော့ အင်မတန် စိတ်ပျက်အံ့သြရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကြားသိလိုက်ရပါတယ် ။
ကလေးမွေးပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံသွားတာတဲ့လေ။ သြော်..လို့ပဲ အားလုံးက စုပ်သတ်နိုင်ခဲ့တော့တယ်။ လူတွေက ပြောကြတယ်၊ လင်မယားကြားပါဆိုမှ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ ဘယ်ရှိမှာလဲတဲ့ ။
ကာမပိုင်ယောကျာ်းလို့လည်းသုံးနှုန်းကြသေးတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသွားရင် ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကာမကို သူ့ယောကျာ်းက ပိုင်သွားပြီလို့ ထင်တတ်ကြတာကိုး။ တကယ်တော့ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ လင်မယားဖြစ်ခြင်း၊ ချစ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ ခွင့်ပြုမပြု ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ အခြေခံစဉ်းစားရတဲ့ အရာမျိုးပါ ။
ကလေးမွေးပြီးစ အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုပြုမူတာဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာလည်း စဉ်းစားလို့တောင်မရပါဘူး ။
အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကိုလွှဲ၊ သွားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိဘူး ဆိုတဲ့အတွက် ငွေကြေးပါထောက်ပံ့ပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ အဲ့ဒီရွာလေးကို ရောက်တော့ ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်း သတိတရမေးတယ်။ ဆေးရုံသွားပြပြီး နေကောင်းနေပြီလားဆိုတော့ ဆုံးသွားရှာပြီတဲ့ ။
ဘာလို့လဲ၊ ဆေးရုံအရောက် နောက်ကျလို့လားဆိုတော့ သွားကိုမသွားလိုက်ရတာ။ Win-Win နဲ့ တွေ့ပြီး သူအိမ်ပြန်သွားတယ်။ ဆေးရုံသွားဖို့ လိုကြောင်း အိမ်ကိုပြောပြပြီးတဲ့အချိန်မှာ ယောက္ခမဖြစ်သူက Win-Win က ပေးလိုက်တဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကို သိမ်းလိုက်တယ် ။
ပြီးတော့ နင် ဆေးရုံသွားစရာ မလိုဘူးတဲ့၊ နင် ဆေးရုံတက်ရင် အိမ်မှာ ကလေးကို ဘယ်သူထိန်းမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ပေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွား ပိုးဝင်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဆေးရုံတောင် မရောက်လိုက်ရဘဲ အိမ်မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံး လိုက်ရတယ် ။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ဘယ်သူ သိမှာလဲ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးနေ၊ ဘ၀တွေ ထိခိုက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရော ဘယ်နှယောက်တောင် ရှိပြီလဲ။ ဒီပြဿနာဟာ အရေးမကြီးဘူးလို့ရော ထင်နေကြတုန်းပါပဲလား …?
ဒီလို အနိုင်ကျင့်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးလုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေနေလို့ရောရတယ်တဲ့လား …?
အမျိုးသမီးတွေဟာ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေကြားထဲမှာ ရှင်သန်နေရပါတယ်။ ခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ မြင်နေ တွေ့နေရပေမယ့် လူတချို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိဘူး။ လင်နဲ့မယားကြားမှာ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ မရှိဘူးရယ်လို့ ခုချိန်ထိ လက်ခံနေကြဆဲပဲ ။
ကာကွယ်ဖို့မပြောနဲ့၊ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေ ရှိနေပါလားဆိုတာကို သိအောင်ပဲ အရင်လုပ်ကြရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
တကယ်တော့ ဒီလို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ယောကျာ်းဖြစ်ခွင့်ရတာ အင်မတန်မှ ကံကောင်းလှပါတယ် …။ ။
ကလေးမှေးပွီး(၃)ရကျမွောကျနမှေ့ာ သူ့ယောကျြားက အတငျးအကွပျ ဆကျဆံလို့သဆေုံးသှားတဲ့(ဖွဈရပျမှနျ)
ကလေးမှေးပွီး ရငျ ၄၅ ရကျ တိတိ ယောကျြား နဲ့ မနနေဲ့ ”ဒါက ကလေးမှေးပွီးစ အမြိုးသမီးတှကေို မှာနကြေ စကားပေါ့ ။
ယောကျြားဖွဈရ တာ ကံကောငျးပါတယျ ။
“ကလေးမှေးပွီးရငျ ၄၅ ရကျတိတိ ယောကျြားနဲ့ မနနေဲ့”ဒါက ကလေးမှေးပွီးစ အမြိုးသမီးတှကေို မှာနကေစြကားပေါ့။ အဲဒီအခြိနျအတှငျးမှာ အမြိုးသမီးကို အနားပေးထားတယျ ။
အငျမတနျမှကို ပငျပနျးခကျခဲတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ၊ ကလေးမှေးဖှားမှုကို လုပျဆောငျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ အားပွနျမှေးရတဲ့ကာလကိုး။ သူ့ရဲ့ကနျြးမာရေးကို ဂရုဈိုကျရတယျ။ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ နရေတယျ ။
ကလေးကို မိခငျနို့တိုကျကြှေးရတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးဆို မိသားစုဝငျတှနေဲ့ အမြိုးသားကလညျး သူ့ကို သညျးသညျးလှုပျ ဂရုစိုကျတတျကွတာပေါ့ ။
သူစားခငျြတာ၊ သူဖွဈခငျြတာ အကုနျလုပျပေးတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအရရော၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအရပါ အားပေးတယျ။ သူလုပျရမယျ့ ကလေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အလုပျတှကေို ဝိုငျးကူပေးကွတယျ ။
ဒါပမေယျ့ တခြို့အမြိုးသမီးတှမှောတော့ ဒီလိုအားပေးကူညီမှုတှေ မရနပေါဘူး။ သူ့အလုပျတှေ သူ့ဟာသူ လုပျရတယျ။ အိမျအလုပျတှလေညျး ဝငျကူရတယျ။ ကလေးဝယြောဝစ်စလညျး သူပဲလုပျရပါတယျ။
အမြိုးသားက ဒါတှေ သူနဲ့မဆိုငျဘူးလို့ ပွောတယျ။ ပိုကျဆံရှာရမယျ့ အလုပျကိုပဲ လုပျတယျ။ ပဲခူးတိုငျး၊ ကြောကျတနျးကြေးရှာ အုပျစုထဲက အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အဖွဈအပကျြကတော့ အဲဒီထကျတောငျ ပိုပါသေးတယျ။
တဈရကျမှာ Win-Win Organization ဆေးကုသနတေဲ့ဆီကို သူ ရောကျလာပါတယျ။ ကလေးမှေးပွီးတာ ၁၀ ရကျပဲ ရှိသေးတယျ။ သူ့မိနျးမကိုယျ အောကျပိုငျးမှာ အနာဖွဈလို့တဲ့ ။
အဖှဲ့ရဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာ ဆုဇငျဝငျးသနျးက စဈဆေးကွညျ့လိုကျတော့ ကလေးမှေးပွီး ပွနျခြုပျထားတဲ့နရောက ကှဲနတော။ ပိုးတှဝေငျပွီး အနံ့အသကျလညျး တျောတျောမကောငျးတော့ဘူး ။
ဒါနဲ့ ပိုးသတျဆေးပေးရုံနဲ့ မရဘဲ ဆေးရုံကိုသှားမှ ဖွဈတော့မယျဆိုတာ သိလိုကျတယျ။ အိမျမှာမှေးပွီး သသေခြောခြာ မခြုပျခဲ့လို့ ပိုးဝငျတာလား အထငျနဲ့ မေးလိုကျတော့ အငျမတနျ စိတျပကျြအံ့သွရတဲ့ အဖွဈအပကျြတဈခုကို ကွားသိလိုကျရပါတယျ ။
ကလေးမှေးပွီး ၃ ရကျမွောကျနမှေ့ာ သူ့ယောကျြားက အတငျးအကွပျ ဆကျဆံသှားတာတဲ့လေ။ သွျော..လို့ပဲ အားလုံးက စုပျသတျနိုငျခဲ့တော့တယျ။ လူတှကေ ပွောကွတယျ၊ လငျမယားကွားပါဆိုမှ မုဒိမျးမှုဆိုတာ ဘယျရှိမှာလဲတဲ့ ။
ကာမပိုငျယောကျြားလို့လညျးသုံးနှုနျးကွသေးတော့ အိမျထောငျပွုပွီးသှားရငျ ဒီအမြိုးသမီးရဲ့ကာမကို သူ့ယောကျြားက ပိုငျသှားပွီလို့ ထငျတတျကွတာကိုး။ တကယျတော့ မုဒိမျးမှုဆိုတာ လငျမယားဖွဈခွငျး၊ ခဈြသူဖွဈခွငျးနဲ့ မသကျဆိုငျဘဲ ခှငျ့ပွုမပွု ဆိုတဲ့အပျေါပဲ အခွခေံစဉျးစားရတဲ့ အရာမြိုးပါ ။
ကလေးမှေးပွီးစ အငျအားခြိနဲ့နတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို ဒီလိုပွုမူတာဟာ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ လကျခံနိုငျစရာ မရှိပါဘူး။ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုလုပျရတယျ ဆိုတာလညျး စဉျးစားလို့တောငျမရပါဘူး ။
အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကိုလှဲ၊ သှားဖို့ ပိုကျဆံမရှိဘူး ဆိုတဲ့အတှကျ ငှကွေေးပါထောကျပံ့ပေးပွီး ပွနျလှတျလိုကျရတယျ။ နောကျထပျတဈခါ အဲ့ဒီရှာလေးကို ရောကျတော့ ဒီအမြိုးသမီးအကွောငျး သတိတရမေးတယျ။ ဆေးရုံသှားပွပွီး နကေောငျးနပွေီလားဆိုတော့ ဆုံးသှားရှာပွီတဲ့ ။
ဘာလို့လဲ၊ ဆေးရုံအရောကျ နောကျကလြို့လားဆိုတော့ သှားကိုမသှားလိုကျရတာ။ Win-Win နဲ့ တှပွေီ့း သူအိမျပွနျသှားတယျ။ ဆေးရုံသှားဖို့ လိုကွောငျး အိမျကိုပွောပွပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ယောက်ခမဖွဈသူက Win-Win က ပေးလိုကျတဲ့ ထောကျပံ့ငှကေို သိမျးလိုကျတယျ ။
ပွီးတော့ နငျ ဆေးရုံသှားစရာ မလိုဘူးတဲ့၊ နငျ ဆေးရုံတကျရငျ အိမျမှာ ကလေးကို ဘယျသူထိနျးမလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို ပေးတယျ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဒီလောကျဆိုးဆိုးရှားရှား ပိုးဝငျနတေဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ ဆေးရုံတောငျ မရောကျလိုကျရဘဲ အိမျမှာတငျ အသကျဆုံးရှုံး လိုကျရတယျ ။
ဒီလို အဖွဈအပကျြမြိုးတှေ ဘယျသူ သိမှာလဲ။ ဒီလိုနညျးနဲ့ အသကျဆုံးရှုံးနေ၊ ဘ၀တှေ ထိခိုကျနရေတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေော ဘယျနှယောကျတောငျ ရှိပွီလဲ။ ဒီပွဿနာဟာ အရေးမကွီးဘူးလို့ရော ထငျနကွေတုနျးပါပဲလား …?
ဒီလို အနိုငျကငျြ့တဲ့ လုပျရပျမြိုးလုပျပွီး အေးအေးဆေးဆေး နနေလေို့ရောရတယျတဲ့လား …?
အမြိုးသမီးတှဟော နှိမျ့ခြ ဆကျဆံမှုတှေ၊ အကွမျးဖကျမှု၊ အနိုငျကငျြ့မှုတှေ၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားမှုတှကွေားထဲမှာ ရှငျသနျနရေပါတယျ။ ခုလိုအဖွဈအပကျြမြိုးတှေ မွငျနေ တှနေ့ရေပမေယျ့ လူတခြို့ကတော့ မွနျမာနိုငျငံဟာ ကြားမခှဲခွားဆကျဆံမှု မရှိဘူး။ လငျနဲ့မယားကွားမှာ မုဒိမျးမှုဆိုတာ မရှိဘူးရယျလို့ ခုခြိနျထိ လကျခံနကွေဆဲပဲ ။
ကာကှယျဖို့မပွောနဲ့၊ ဒီလိုကိစ်စရပျတှေ ရှိနပေါလားဆိုတာကို သိအောငျပဲ အရငျလုပျကွရဦးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
တကယျတော့ ဒီလို လူမှုပတျဝနျးကငျြမြိုးမှာ ယောကျြားဖွဈခှငျ့ရတာ အငျမတနျမှ ကံကောငျးလှပါတယျ …။ ။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6212/feed0“လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ?” https://itechmedia.info/mm/archives/6205 https://itechmedia.info/mm/archives/6205#respond Fri, 12 Jun 2020 13:37:56 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6205
ကိုယ်တွေ သဘောကျရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ကွဲကွာနေကြတာ မြင်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက အတောမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အဆင်မပြေကြတော့လို့ပေါ့။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ချစ်ပြီး အစစအရာရာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့ပေမယ့် အဖုထစ်တွေ ၊ ပြဿနာတွေ များလာတဲ့အခါ … ညှိယူလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် လျှောက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြတာပါပဲ။
ဒါဆို ဘာလို့ လက်ထပ်ကြသေးလဲလို့ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာဦးမှာပါ။
ဘယ်သူမှလည်း မကွဲချင်ပါဘူး။ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်း မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့သူနဲ့ပဲ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းသင်းသွားမယ်လို့ ကိုယ်စီတွေးထားကြမှာပါ။
ချစ်သူသက်တမ်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူ့အကြောင်း ၊ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သိလောက်ပြီလို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း အတူတူနေ ပေါင်းသင်းနေထိုင်တော့မှ အကြောင်းသိရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ ကွာရှင်းကြတာမျိုးက သိပ်တော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ သူ့ဘဝနဲ့ သူပဲဆိုတော့ဘယ်သူမှ ဝင်မစွတ်ဖက်လိုကြပါဘူး။
တစ်ဖက်မှာလည်း ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် နှစ်ရှည်ကာလကြာတဲ့ထိ ဘာအသံမှမထွက်၊ ချစ်မြဲ ချစ်ဆဲ ချစ်လို့မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အတွဲတွေမြင်ရင်လည်း တကယ်အားကျရပါတယ်။
သစ္စာရှိလိုက်ကြပုံများ ဆိုပြီး ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ လူတိုင်းဘဝမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အေးချမ်းစွာပဲ ဖြတ်သန်းချင်ကြမှာပါ။ တစ်ချို့လူတွေအတွက်ကြတော့လည်း အမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်။
အချို့ကြတော့လည်း အချစ်ဆိုတာကို စိတ်ကုန်နေပြီး တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းလိုကြတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်အတွက် မှန်ကန်တဲ့လူနဲ့ မတွေ့မချင်း တစ်ယောက်တည်း အေးဆေးနေတာပဲကောင်းပါတယ်။
မဟုတ်ရင် တစ်ယောက်လာလည်း ဒီပုံစံ ၊ နောက်တစ်ယောက်လာလည်း ဒီအချိုးဆိုသင့်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အပြင် စိတ်လေစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ လူကိုပဲ စောင့်ဆိုင်းပါ။
“လူတှအေမွငျမှာ အရမျးခဈြခဲ့ကွရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပွတျစဲမှုတှေ ဖွဈလာရတာလဲ?”
ကိုယျတှေ သဘောကရြတဲ့ အနုပညာရှငျစုံတှဲတှေ ကှဲကှာနကွေတာ မွငျတော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှကေ အတောမသတျနိုငျခဲ့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှဈဦး နှဈဖကျလုံး အဆငျမပွကွေတော့လို့ပေါ့။ တဈယောကျအပျေါ တဈယောကျခဈြပွီး အစစအရာရာ နားလညျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျထားခဲ့ပမေယျ့ အဖုထဈတှေ ၊ ပွဿနာတှေ မြားလာတဲ့အခါ … ညှိယူလို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျတော့တဲ့အခါ ကိုယျ့လမျးကိုယျ လြှောကျဖို့ ရှေးခယျြလိုကျကွတာပါပဲ။
ဒါဆို ဘာလို့ လကျထပျကွသေးလဲလို့ မေးခှနျးတှေ ထှကျလာဦးမှာပါ။
ဘယျသူမှလညျး မကှဲခငျြပါဘူး။ အနာဂတျမှာ ဘာဖွဈမယျဆိုတာ ဘယျသူမှလညျး မမွငျနိုငျခဲ့ဘူး။ အစပိုငျးမှာတော့သူနဲ့ပဲ သကျဆုံးတိုငျ ပေါငျးသငျးသှားမယျလို့ ကိုယျစီတှေးထားကွမှာပါ။
ခဈြသူသကျတမျး ကွာလာတာနဲ့အမြှ သူ့အကွောငျး ၊ ကိုယျ့အကွောငျးတှေ သိလောကျပွီလို့ ထငျထားခဲ့ပမေယျ့ တကယျတမျး အတူတူနေ ပေါငျးသငျးနထေိုငျတော့မှ အကွောငျးသိရတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။
အခုခတျေမှာ ကှာရှငျးကွတာမြိုးက သိပျတော့မထူးဆနျးတော့ပါဘူး။ သူ့ဘဝနဲ့ သူပဲဆိုတော့ဘယျသူမှ ဝငျမစှတျဖကျလိုကွပါဘူး။
တဈဖကျမှာလညျး ပွနျကွညျ့လိုကျရငျ နှဈရှညျကာလကွာတဲ့ထိ ဘာအသံမှမထှကျ၊ ခဈြမွဲ ခဈြဆဲ ခဈြလို့မဆုံးဖွဈနတေဲ့ အတှဲတှမွေငျရငျလညျး တကယျအားကရြပါတယျ။
သစ်စာရှိလိုကျကွပုံမြား ဆိုပွီး ကွညျ့ရတာ စိတျခမျြးသာရတယျ။ လူတိုငျးဘဝမှာ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး အေးခမျြးစှာပဲ ဖွတျသနျးခငျြကွမှာပါ။ တဈခြို့လူတှအေတှကျကွတော့လညျး အမွဲတမျးရှုပျထှေးနတေတျတယျ။
အခြို့ကွတော့လညျး အခဈြဆိုတာကို စိတျကုနျနပွေီး တဈယောကျတညျးဖွတျသနျးလိုကွတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ ကိုယျ့အတှကျ မှနျကနျတဲ့လူနဲ့ မတှမေ့ခငျြး တဈယောကျတညျး အေးဆေးနတောပဲကောငျးပါတယျ။
မဟုတျရငျ တဈယောကျလာလညျး ဒီပုံစံ ၊ နောကျတဈယောကျလာလညျး ဒီအခြိုးဆိုသငျ့အတှကျ အကြိုးမရှိတဲ့အပွငျ စိတျလစေပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မှနျကနျတဲ့ လူကိုပဲ စောငျ့ဆိုငျးပါ။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6205/feed0ထပ်တူထပ်မျှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် မထက်ရယ် . . . https://itechmedia.info/mm/archives/6203 https://itechmedia.info/mm/archives/6203#respond Fri, 12 Jun 2020 13:00:35 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6203
ဝါရင့်မင်းသမီးချောလေး ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တစ်ချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်း အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကနေ အချိန်အတော်ကြာရပ်နားထားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး
ယခုမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် …။
သူမကတော့ ယခုမှာ သွေးတိုးပြီးလေဖြတ်သွားလို့ မန္တလေးမင်္ဂလာဆေးရုံမှာအရေးပေါ်တင်လိုက်ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် စိတ်ပူနေခဲ့ကာ အနားမှာ အချိန်ပြည့် ဂရုစိုက်ပေးနေခဲ့ပါတယ် …။
သူမကတော့ ” အဖေသွေးတိုးပီးလေဖြတ်သွားလို့မန္တလေးမင်္ဂလာဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်တင်လိုက်ရပါတယ် …
သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေ အားလုံးပဲဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ကြပါနော်…အဖေလဲအမြန်ဆုံးသက်သာပါစေဆုတောင်းပါတယ်… “ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းသူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနေအမြန်ကောင်းလာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ် …။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေးထက်ထက်မိုးဦးတို့ သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရပါတယ်နော် …။ ။
Source : Htet Htet Moe Oo
ထပျတူထပျမြှ စိတျမကောငျး ဖွဈမိပါတယျ မထကျရယျ . . .
ဝါရငျ့မငျးသမီးခြောလေး ထကျထကျမိုးဦးကတော့ တဈခြိနျက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ထိပျတနျးသရုပျဆောငျတှထေဲမှာ တဈယောကျအပါအဝငျ ဖွဈခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာကိုရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ပီပွငျတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှမြေားစှာကို ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ယနအေ့ခြိနျထိ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုလညျး အခိုငျအမာရယူထားနိုငျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးတဈခွမျးမှာ အခိုငျအမာနရောယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေနေ အခြိနျအတျောကွာရပျနားထားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး
ယခုမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ပွနျလညျလုပျကိုငျလကျြရှိတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ …။
သူမကတော့ ယခုမှာ သှေးတိုးပွီးလဖွေတျသှားလို့ မန်တလေးမင်ျဂလာဆေးရုံမှာအရေးပျေါတငျလိုကျရတဲ့ ဖခငျဖွဈသူအတှကျ စိတျပူနခေဲ့ကာ အနားမှာ အခြိနျပွညျ့ ဂရုစိုကျပေးနခေဲ့ပါတယျ …။
သူမကတော့ ” အဖသှေေးတိုးပီးလဖွေတျသှားလို့မန်တလေးမင်ျဂလာဆေးရုံမှာ အရေးပျေါတငျလိုကျရပါတယျ …
သှေးတိုးရောဂါရှိသူတှေ အားလုံးပဲဂရုစိုကျဆငျခွငျကွပါနျော…အဖလေဲအမွနျဆုံးသကျသာပါစဆေုတောငျးပါတယျ… “ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ပရိသတျတှအေနနေဲ့လညျးသူမရဲ့ ဖခငျဖွဈသူနအေမွနျကောငျးလာပါစကွေောငျး ဆုတောငျးပေးနကွေပါတယျ …။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မငျးသမီးခြောလေးထကျထကျမိုးဦးတို့ သားအဖနှဈယောကျရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွ ပေးလိုကျရပါတယျနျော …။ ။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6203/feed0ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ… https://itechmedia.info/mm/archives/6197 https://itechmedia.info/mm/archives/6197#respond Fri, 12 Jun 2020 12:39:15 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6197
ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ…
မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခညားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်သူကစလိုက်တယ်မသိ။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးသူတွေရဲ့လက်သုံးစကား လက်နက် ကြီး ဖြစ်လို့။ ဒီတော့ ငွေရှင်ခမျာလည်း အတိုးလေးရလို့ ချေးမိတာ။ အခုပြန်တောင်းတော့ တချိန်က မျက်နာ ငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဆီက ငွေချေးခဲ့တဲ့သူက အခုတော့ မျက်နာထားကြီးတင်းပြီး ကိုယ်ကပဲ သူဆီက ပြန်ချေးနေသလိုလို …။
ဒီလိုတောင်းလို့မရရင် တရားစွဲတောင်းမယ်လို့ စိတ်ထဲက ပြင်ထားပေမယ့် တစ်ဖက်က အတိုးပါတဲ့အတွက် ထောင် ၅ နှစ် ချလို့ရ တယ်လို့ပြောလာတော့ စိတ်ထဲမှာ ချေးထားမိတဲ့ငွေ ကူညီပေးထားတဲ့ငွေလေး ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလား ဆိုပီး သောကအပူတွေဖြစ်။အတိုးပါရင် ထောင် ၅ နှစ်ထိ ချလို့ရတယ်ဆိုတာ ဥပဒေ မှာ မရှိဘူးလား ဆိုရင် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ခုတုံးလုပ်ပီး ငွေချေးသူ တွေက ခြိမ်းခြောက်နေတာ တွေ့ရတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိစုမယ့် လစာလေးနဲ့ ငွေလေးနဲ့ ခင်လို့ဖြစ်စေ အတိုးနည်းနည်းရရင်လည်း မဆိုးပါဘူး ဆိုပီး ထုတ်ချေးမိတဲ့ ငွေရှင်တွေခမျာ ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး ဖြစ်မိတာတွေ ကို တွေ့ရလို့ ဒီစာလေး ရေးရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ငွေချေးထားတဲ့ငွေရှင်တွေကိုပြောလိုတာက တစ်ဖက်ငွေချေးသူက ဒီလိုပြောလာရင် လုံးဝစိတ်မပူပါ နဲ့။ မကြောက်ပါနဲ့။ မိမိချေးထားတဲ့ငွေတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ ပြန်တောင်းပါ။ ပေးထားတဲ့ငွေ ရဲ့ အတိုးသာ မရရင်နေပါမယ်။ အရင်းကတော့သေချာပေါက် ပြန်ရပါတယ်။ ထောင် ၅ နှစ်ချလို့ရတယ်ဆိုတာက မိမိသည်ငွေတိုးချေးစားခွင့်လိုင်စင်မရှိပါပဲလျက် ငွေတိုးချေးစားခြင်းကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်သူကိုသာ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေ ကို ကူညီသည့်အနေဖြင့် တခါတရံ ငွေချေးပေးတဲ့သူ မပါဝင်ပါ။ ဒါကြောင့် ငွေချေးပေးထားတာ ရှိရင် ရဲရဲသာတောင်းကြပါနော် …။
ပိုကျဆံခြေးထားမိလို့ဆပျမယျ့သူက မဆပျနိုငျဘူး ကွိုကျတဲ့နရောတိုငျလို့ပွောလာရငျ ဒီစာကိုဖတျပွီး ရဲရဲတောငျးလို့ရပါပွီ…
မဆပျနိုငျဘူး ကွိုကျတဲ့နရောတိုငျ ခညားတို့ငှတေိုးခြေးစားထားတာ ထောငျထဲ ၅ နှဈရောကျသှားမယျ။ဒီလိုစကားတှေ ခဏခဏကွားနရေပါတယျ။ ဘယျသူကစလိုကျတယျမသိ။ ဒီစကားလေးက ငှခြေေးသူတှရေဲ့လကျသုံးစကား လကျနကျ ကွီး ဖွဈလို့။ ဒီတော့ ငှရှေငျခမြာလညျး အတိုးလေးရလို့ ခြေးမိတာ။ အခုပွနျတောငျးတော့ တခြိနျက မကျြနာ ငယျလေးနဲ့ ကိုယျ့ဆီက ငှခြေေးခဲ့တဲ့သူက အခုတော့ မကျြနာထားကွီးတငျးပွီး ကိုယျကပဲ သူဆီက ပွနျခြေးနသေလိုလို …။
ဒီလိုတောငျးလို့မရရငျ တရားစှဲတောငျးမယျလို့ စိတျထဲက ပွငျထားပမေယျ့ တဈဖကျက အတိုးပါတဲ့အတှကျ ထောငျ ၅ နှဈ ခလြို့ရ တယျလို့ပွောလာတော့ စိတျထဲမှာ ခြေးထားမိတဲ့ငှေ ကူညီပေးထားတဲ့ငှလေေး ပွနျမရနိုငျတော့ဘူးလား ဆိုပီး သောကအပူတှဖွေဈ။အတိုးပါရငျ ထောငျ ၅ နှဈထိ ခလြို့ရတယျဆိုတာ ဥပဒေ မှာ မရှိဘူးလား ဆိုရငျ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကို ခုတုံးလုပျပီး ငှခြေေးသူ တှကေ ခွိမျးခွောကျနတော တှရေ့တော့ ကိုယျ့ဆီမှာ ရှိစုမယျ့ လစာလေးနဲ့ ငှလေေးနဲ့ ခငျလို့ဖွဈစေ အတိုးနညျးနညျးရရငျလညျး မဆိုးပါဘူး ဆိုပီး ထုတျခြေးမိတဲ့ ငှရှေငျတှခေမြာ ဖှတျမရ ဓားမဆုံး ဖွဈမိတာတှေ ကို တှရေ့လို့ ဒီစာလေး ရေးရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ငှခြေေးထားတဲ့ငှရှေငျတှကေိုပွောလိုတာက တဈဖကျငှခြေေးသူက ဒီလိုပွောလာရငျ လုံးဝစိတျမပူပါ နဲ့။ မကွောကျပါနဲ့။ မိမိခြေးထားတဲ့ငှတှေကေို ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ ပွနျတောငျးပါ။ ပေးထားတဲ့ငှေ ရဲ့ အတိုးသာ မရရငျနပေါမယျ။ အရငျးကတော့သခြောပေါကျ ပွနျရပါတယျ။ ထောငျ ၅ နှဈခလြို့ရတယျဆိုတာက မိမိသညျငှတေိုးခြေးစားခှငျ့လိုငျစငျမရှိပါပဲလကျြ ငှတေိုးခြေးစားခွငျးကို လုပျငနျးတဈခုအနနေဲ့ လုပျကိုငျသူကိုသာ ဆိုလိုခွငျးဖွဈပွီး မိတျဆှေ ကို ကူညီသညျ့အနဖွေငျ့ တခါတရံ ငှခြေေးပေးတဲ့သူ မပါဝငျပါ။ ဒါကွောငျ့ ငှခြေေးပေးထားတာ ရှိရငျ ရဲရဲသာတောငျးကွပါနျော …။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6197/feed0ဓမ္မတာမှန်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၅) ချက်… https://itechmedia.info/mm/archives/6193 https://itechmedia.info/mm/archives/6193#respond Fri, 12 Jun 2020 11:19:31 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6193
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6193/feed0အလွန် လန်းသွားတဲ့ မြန်မာပြည်က JJ Express မှန်လုံ ခရီးသည်တင်ကား… https://itechmedia.info/mm/archives/6188 https://itechmedia.info/mm/archives/6188#respond Fri, 12 Jun 2020 10:49:34 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6188
အလွန် လန်းသွားတဲ့ မြန်မာပြည်က JJ Express မှန်လုံ ခရီးသည်တင်ကား…
လန်းလိုက်တာကွာ ကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စေတနာ
မြန်မာပြည် JJ Express မှန်လုံ ခရီးသည်တင် အဝေးပြေးယာဉ်တွေပေါ်က Separate ထိုင်ခုံ‌‌တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
Credit Myint Oo
Ref. Po Naing Lin
အခု စထွက်ပီလားဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး …။
ဒီကားမျိုးနဲ့ ခရီးသွားရရင်တော့ တန်မှတန်ပါပဲနော် …။
ချစ်သူစုံတွဲ လင်မယားတွေ အတွက်တော့ အတူထိုင်လို့ မရတော့ဘူးနော် …။
တစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးသွားရတာနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ရှယ်ပဲ …။
အားလုံးသော ခရီးသွားမိဘပြည်သူများ ဘေးမသီရန်မခပဲ မိမိလိုရာခရီးကို
ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူး သွားနိုင် လာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ။
အလှနျ လနျးသှားတဲ့ မွနျမာပွညျက JJ Express မှနျလုံ ခရီးသညျတငျကား…
လနျးလိုကျတာကှာ ကားပိုငျရှငျတှရေဲ့ စတေနာ
မွနျမာပွညျ JJ Express မှနျလုံ ခရီးသညျတငျ အဝေးပွေးယာဉျတှပေျေါက Separate ထိုငျခုံ‌‌တှပေဲ ဖွဈပါတယျ …။
အခု စထှကျပီလားဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး …။
ဒီကားမြိုးနဲ့ ခရီးသှားရရငျတော့ တနျမှတနျပါပဲနျော …။
ခဈြသူစုံတှဲ လငျမယားတှေ အတှကျတော့ အတူထိုငျလို့ မရတော့ဘူးနျော …။
တဈယောကျထဲ လှတျလှတျလပျလပျ ခရီးသှားရတာနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ ရှယျပဲ …။
အားလုံးသော ခရီးသှားမိဘပွညျသူမြား ဘေးမသီရနျမခပဲ မိမိလိုရာခရီးကို
ဖွောငျ့ဖွောငျ့ဖွူးဖွူး သှားနိုငျ လာနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော …။ ။
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6188/feed0လုပ်ရက်လိုက်တာ…လူနာတွေကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန် ဆရာမတွေကိုမှ ပစ်မှတ်ထားရသလားဗျာ https://itechmedia.info/mm/archives/6178 https://itechmedia.info/mm/archives/6178#respond Fri, 12 Jun 2020 10:04:20 +0000 https://itechmedia.info/mm/?p=6178
လုပ်ရက်လိုက်တာ…လူနာတွေကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန် ဆရာမတွေကိုမှ ပစ်မှတ်ထားရသလားဗျာ
“ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ”
ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အေးအေးဆေးဆေး လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ …။
ဒီနေ့ ကလေးဆောင်က ဆရာမလေး မနက် ရနာရီကနေ ညနေ၅ နာရီထိ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်တယ် …။
ထွက်လာတော့ သူ့ဆိုင်ကယ် မရှိတော့ပါဘူး …။
ဝယ်ထားတာ ရက်၂၀၊ တန်ဖိုးက ၁၂သိန်းပါ။ လိုင်စင် ဝင်ဖို့ လုပ်တုန်း ဆေးရုံထဲထိ ဝင်ပြီးခိုးသွားတာပါ …။
ခိုးသူက (၃) ယောက်ပါ။ မိန်းကလေးက ဆိုင်ကယ်ရွေးပေးတဲ့ သူ၊ ကတုံးဆံပင်ပေါက်က ထွက်လမ်း ရှင်းတဲ့သူ၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ကိုင်ထားသူက သော့တူနဲ့ ဖွင့်တဲ့သူပါ …။
ပထမ တစ်ပတ်က ခိုးတဲ့ သူခိုး ၂ ယောက်ကတော့ ရဲစခန်းမှာ မိထားပါပြီ …။
ဒီ ၃ ယောက် ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာ ကူညီပေးကြပါအုံး …။
ကျွန်တော်တို့ လူနာတွေကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး ဆေးကုပါရစေ …။ ။
Credit to Dr.Than Min ThanMinnHtut( မီးအိမ်ရှင်)
လုပျရကျလိုကျတာ…လူနာတှကေုပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျ ဆရာမတှကေိုမှ ပဈမှတျထားရသလားဗြာ
“ဆရာဝနျ ဆရာမတှေ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ လူနာ ကွညျ့ပါရစလေားဗြာ”
ကြှနျတျောတို့ ဆရာဝနျ ဆရာမတှေ အေးအေးဆေးဆေး လူနာ ကွညျ့ပါရစလေားဗြာ …။
ဒီနေ့ ကလေးဆောငျက ဆရာမလေး မနကျ ရနာရီကနေ ညနေ၅ နာရီထိ မနားတမျး အလုပျလုပျတယျ …။
ထှကျလာတော့ သူ့ဆိုငျကယျ မရှိတော့ပါဘူး …။
ဝယျထားတာ ရကျ၂၀၊ တနျဖိုးက ၁၂သိနျးပါ။ လိုငျစငျ ဝငျဖို့ လုပျတုနျး ဆေးရုံထဲထိ ဝငျပွီးခိုးသှားတာပါ …။
ခိုးသူက (၃) ယောကျပါ။ မိနျးကလေးက ဆိုငျကယျရှေးပေးတဲ့ သူ၊ ကတုံးဆံပငျပေါကျက ထှကျလမျး ရှငျးတဲ့သူ၊ ကြှတျကြှတျအိတျ ကိုငျထားသူက သော့တူနဲ့ ဖှငျ့တဲ့သူပါ …။
ပထမ တဈပတျက ခိုးတဲ့ သူခိုး ၂ ယောကျကတော့ ရဲစခနျးမှာ မိထားပါပွီ …။
ဒီ ၃ ယောကျ ဘယျသူလဲ၊ ဘယျမှာနလေဲဆိုတာ ကူညီပေးကွပါအုံး …။
ကြှနျတျောတို့ လူနာတှကေို စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့ထားပွီး ဆေးကုပါရစေ …။ ။
Credit to Dr.Than Min ThanMinnHtut( မီးအိမျရှငျ)
]]> https://itechmedia.info/mm/archives/6178/feed 0